Fanofana fiara AVIS izao any Myanmar
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Fanofana fiara AVIS izao any Myanmar
Fiara fanofana AVIS dia nanambara ny fanitarana farany azy ho any Myanmar mba hanohanana ny mpanao raharaham-barotra sy ny mpandeha voly. Ny foiben'ny birao vaovao Avis Myanmar dia ao amin'ny Inya Lake Hotel, Yangon.
Avis Myanmar, sampana iray an'ny RMA Group, dia manolotra vahaolana vahaolana amin'ny fiara maharitra sy maharitra miaraka amina fiaramanidina vaovao. Ny mpanjifa dia atolotra ny hofan-trano atokana ho an'ny mpamily izay manomboka amin'ny toekarena ka hatrany amin'ny fiara ara-barotra.
“Ny iray amin'ireo laharam-pahamehantsika dia ny fananganana tambajotra manerantany sy ny fanitarana ny dian-tongotra isam-paritra. Myanmar dia firenena manana pototra lehibe indrindra amin'ny fampivoarana ny indostrian'ny fiara ary manantena fatratra ny ho anisan'ity fitomboana ity izahay, "hoy i Hans Mueller, filoha lefitra mpisolo toerana maneran-tany - Iraisam-pirenena, Vondrona Budget Avis.
“Amin'ny fisokafan'ny biraon'ny Avis any Myanmar dia afaka hanolotra safidy fanofana fiara bebe kokoa izahay ary hanampy amin'ny fananganana indostrialy bebe kokoa. Miezaka ihany koa izahay manompo ny mpanjifantsika amin'ny toerana misy azy ireo tsy any Yangon ihany fa amin'ireo tanàna hafa amin'ny alàlan'ny tambajotranay manitatra any Mandalay, Nay Pyi Taw, Bagan, Taunggyi, ary Dawei, ”hoy ihany izy. Ramatoa Prasoporn Tansupasiri, Tale jeneraly, Avis Myanmar.
Rivo-doza Dorian indray amin'ny fanafihana ny toeran'ireo fizahantany?
Orinasa fizahantany: Fifandraisana amin'ny haino aman-jery